Fanoroam-pejy amin'ny sehatra
fanontaniana Fanoroam-pejy amin'ny sehatra
1 taona 4 volana lasa izay #723 by yorammelnik
Te-hamorona sehatra fitiliana aho amin'ny famolavolana3d v4.
Nampiasa ny SimDirector aho mba hamoronana tantara iray misy lisitry ny fomba.
Ny olako dia rehefa rehefa manidina dia tsy afaka mampiasa mampiasa gps na fitaovana hafa aho mba hahazoana torolalana amin'ny lisitry ny lisitra.
Misy fomba hanaovana izany ve?
Fotoana mamorona pejy: 0.093 segondra